Tag: Twitter | Martech Zone
Whatagraph: Multi-Channel, La Socodka Xogta-Waqtiga Dhabta ah & Warbixinada Hay'adaha & Kooxaha
Arbacada, Juun 8, 2022 Arbacada, Juun 8, 2022 Douglas Karr
In kasta oo iib kasta iyo madal martech ay leeyihiin is-dhexgalyo warbixineed, qaar badan oo aad u adag, waxay ka gaabiyaan bixinta nooc kasta oo aragti dhammaystiran oo suuqgeyn dijital ah. Suuqgeyste ahaan, waxaan isku daynaa inaan xarun u dhigno warbixinta Falanqaynta, laakiin xitaa inta badan waxay gaar u tahay waxqabadka goobtaada halkii aad ka ahaan lahayd dhammaan kanaalada kala duwan ee aad ka shaqaynayso. warbixin madal,
Reasons Why People Unfollow Brands On Twitter
Tuesday, May 24, 2022 Jimco, Juun 24, 2022 Douglas Karr
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah sawirada ugu qosolka badan taas Highbridge sameeyey ilaa taariikhda. Waxaan macaamiisheena u sameynaa tiro badan oo macluumaad ah, laakiin markii aan akhriyay maqaalka eConsultancy ee ku saabsan sababta ay dadku uga fogaadaan Twitter-ka, isla markiiba waxaan mooday inay samayn karto macluumaad xiiso leh. Nashqadeeyahayaga macluumaadka ayaa la keenay wax ka baxsan riyooyinkeennii duurjoogta ahaa. Miyaad aad uga buuq badan tahay Twitter-ka? Ma waxaad riixaysaa iibyo badan? Ma si xishood la'aan ah ayaad dadka u baaluqaysaa? Mise waa
Waxaan caawinaa dhowr meherado maxali ah, oo ay ku jiraan qabatinka goobo badan iyo silsilad soo kabasho, silsilad dhakhtar ilkeed, iyo dhawr ganacsi oo adeegyada guriga ah. Markii aanu fuulnay macaamiishaas, run ahaantii aad baan uga naxay, tirada shirkadaha wadaniga ah ee aan haysan si ay wax u dalbadaan, u ururiyaan, u maamulaan, uga jawaabaan, una daabacaan markhaatifurka iyo dib u eegista macaamiishooda. Waxaan u sheegi doonaa tan si aan mugdi ku jirin… haddii dadku ay ka helaan meheraddaada (macmiilka ama B2B) iyada oo ku saleysan juqraafi ahaan goobtaada,
B2B: Sida Loo Sameeyo Jiilka Hogaaminta Warbaahinta Bulshada Waxtarka Leh
Khamiista, Febraayo 17, 2022 Khamiista, Febraayo 17, 2022 Ann Smarty
Baraha bulshada waa hab fiican oo lagu dhaliyo taraafikada iyo wacyigelinta sumadda, laakiin waxaa laga yaabaa inay aad u adag tahay soo saarista hogaanka B2B. Waa maxay sababta warbaahinta bulshadu aysan waxtar ugu lahayn u adeegida mashiinnada iibka ee B2B iyo sida looga gudbo caqabadaas? Aan isku dayno inaan ogaano! Caqabadaha Jiilka Hogaaminaya Warbaahinta Bulshada Waxaa jira laba sababood oo waaweyn oo ay shabakadaha bulshadu ku adagtahay in loo beddelo kanaalada abuurista rasaasta: Suuqgeynta warbaahinta bulshadu waa kala go'a - Maya
Shoutcart: Waa Hab Fudud Oo Dhawaaqyada Looga Iibsan Karo Dadka Saamayn Ku Leh Baraha Bulshada
Talaado, Disembar 28, 2021 Talaado, Disembar 28, 2021 Douglas Karr
Kanaalada dhijitaalka ah waxay ku sii wadaan inay u koraan si xawli ah, caqabad ku ah suuqlayda meel kasta marka ay go'aansadaan waxa ay kor u qaadayaan iyo halka ay ku horumarinayaan alaabadooda iyo adeegyadooda internetka. Markaad raadinayso inaad gaadho dhagaystayaal cusub, waxa jira kanaalo dhijitaal ah oo dhaqameed sida daabacaadaha warshadaha iyo natiijooyinka raadinta… laakiin sidoo kale waxa jira saamaynayaal. Suuqgeynta saamaynta leh ayaa ku sii socota kobaca caannimada sababtoo ah saameeyayaasha ayaa si taxadar leh u koray oo u dajiyay dhagaystayaashooda iyo taageerayaashooda wakhti ka dib. Dhagaystayaashooda ayaa leh